Damasko ho atemmusɛm (1-11)
Yehowa bɛka aman no anim (12-14)
17 Damasko ho atemmusɛm ni:+ “Hwɛ! Damasko renyɛ kurow bio,Na ɛbɛdan abo asum hɔ.*+ 2 Wobegyaw Aroer+ nkurow;Ɛbɛyɛ baabi a nguan bebutubutuw,Na obiara renhunahuna wɔn. 3 Nkurow a wɔabɔ ho ban bɛyera afi Efraim,+Na ahenni ayera afi Damasko;+Na Siriafo a wɔaka noBɛyɛ sɛ Israelfo* anuonyam,” asafo Yehowa na waka. 4 “Saa da no, Yakob anuonyam so bɛtew,Na ne nipadua a ɛte apɔw no* bɛfɔn. 5 Ɛbɛyɛ sɛ bere a okuafo retwa hwiit*Na ɔde ne nsa repompan hwiit* mmɛtem,Te sɛ obi a ɔresesaw hwiit* ase wɔ Refaim Bon+ mu.* 6 Ase kakraa bi na ɛbɛka,Te sɛ bere a wɔwosow ngodua: Ngodua aba a abere abien anaa abiɛsa pɛ na ɛbɛka wɔ dua no nkɔnmu,Na anan anaa anum pɛ na ɛbɛka wɔ ne nnubaa so,”+ Israel Nyankopɔn Yehowa na waka. 7 Saa da no, onipa bɛma n’ani so ahwɛ ne Yɛfo na obegyen n’ani ahwɛ Israel Kronkronni no. 8 Ɔrenhwɛ afɔremuka+ a ɛyɛ ne nsa ano adwuma+ no; na ɔrennyen n’ani nhwɛ nea ɔde ne nsateaa ayɛ, abosonnua* anaa ade a wɔde hyew aduhuam. 9 Saa da no, ne nkurow a ɛyɛ den bɛyɛ sɛ beae a aka kwae mu,+Te sɛ dubaa a wogyawee wɔ Israelfo anim;Ɛbɛdan amamfo. 10 Efisɛ wo werɛ afi wo nkwagye Nyankopɔn;+Wonkae wo Botan+ dennen no bio. Ɛno nti na wudua nnua fɛfɛɛfɛNa wotɛw ɔnanani dua* wɔ hɔ no. 11 Wotɔ wo bo ase gye wo nnua ho ban awia,Woma w’aba fifi anɔpa,Nanso da a ɔyare ne yaw a ɛrennyae da bɛba no, ɛso aba betu ayera.+ 12 Tie! Aman yɛ gyegyeegye,Wobu fa so te sɛ po a ɛrehuru kutukutu! Aman yɛ dede,Wɔn dede te sɛ nsu kɛse a ɛreworo so! 13 Aman no bɛyɛ dede te sɛ nsu bebree a ɛreworo so. Ɔbɛka wɔn anim, na wobeguan akɔ akyirikyiri,Wobetiw wɔn te sɛ bepɔw so ntɛtɛwa a mframa de rekɔ,Te sɛ nwura* a ahum ama ɛredi kyinhyia. 14 Edu anwummere a, akomatu. Ansa na ade bɛkye no, na wonni hɔ. Eyi ne wɔn a wɔfom yɛn nneɛma no kyɛfa,Ne wɔn a wogye yɛn ho nneɛma no kyɛfa.
^ Anaa “ɛbɛdan amamfo.”
^ Nt., “ne honam mu srade no.”
^ Anaa “ananafo nyame.”